မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောလုပ်ငန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်းဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး မှာ ဦးမောင်မောင်ငြိမ်း ဖြစ်သည်။
၈ ပင်လယ်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ
မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်းသည် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံတော်ပိုင်သင်္ဘောလိုင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍကို ဖြည့်ဆည်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှစ၍တည်ထောင်ခဲ့သော သင်္ဘောလိုင်းဖြစ်သည်။
ကုန်တင်ပို့သူနှင့်ခရီးသည်များ၏လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားမည်။
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင် သင်္ဘောလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်မည့် သယ်ယူပို့ဆောင်မှုဖြင့် ပြည်သူစိတ်ချမ်းသာမှု ဖော်ဆောင်ရမည်။
ထားဝယ် (တန်ချိန် -၁၁၆၅၄) ၊ (သယ်ဆောင်နိုင်သည့်ကုန်သေတ္တာ-၃၈၂)
မော်လမြိုင် (တန်ချိန် -၁၁၆၆၀) ၊ (သယ်ဆောင်နိုင်သည့်ကုန်သေတ္တာ-၄၀၀)
ကျိုင်းတုံ (တန်ချိန် -၁၁၆၅၄) ၊ (သယ်ဆောင်နိုင်သည့်ကုန်သေတ္တာ-၃၈၂)
စစ်တွေ (တန်ချိန် -၁၁၆၆၀) ၊ (သယ်ဆောင်နိုင်သည့်ကုန်သေတ္တာ-၄၀၀)
စစ်ကိုင်း (တန်ချိန် -၁၃၀၅၅) ၊ (သယ်ဆောင်နိုင်သည့်ကုန်သေတ္တာ-၃၈၃)
Cosmic Master(တန်ချိန် -၁၀၂၉၀)
မကွေး (တန်ချိန် -၁၃၀၅၅) ၊ (သယ်ဆောင်နိုင်သည့်ကုန်သေတ္တာ-၃၈၃)
Cosmic Challenger(တန်ချိန် -၈၃၃၅)
ပဲခူး (တန်ချိန် -၁၃၁၀၅) ၊ (သယ်ဆောင်နိုင်သည့်ကုန်သေတ္တာ-၃၈၃)
Ocean Brave (တန်ချိန် -၆၉၅၀)
မန္တလေး (တန်ချိန် -၁၃၁၀၅) ၊ (သယ်ဆောင်နိုင်သည့်ကုန်သေတ္တာ-၃၈၃)
Spring Trader (တန်ချိန် -၈၂၄၂)
ချင်းရွှေဟော် (တန်ချိန် -၃၃၀၀)
မိုင်းလား (တန်ချိန် -၃၃၀၀)
ပုဂံ (တန်ချိန် -၂၀၇၆)
ဘားအံ (တန်ချိန် -၂၀၇၆)
လွိုင်ကော် (တန်ချိန် -၇၉၀)
လားရှိုး (တန်ချိန် -၇၀၀)
ဖားရွှေကျော်ရွာ (တန်ချိန် -၁၅၇၅)
ရွှေလီ (တန်ချိန် -၁၃၀၅)
ထုံးရွာ (တန်ချိန် -၁၇၂၀)
ဟားခါး (တန်ချိန် -၉၄၈) ၊ တင်ဆောင်နိုင်သောခရီးသည် (၃၁၅)
မြစ်ကြီးနား (တန်ချိန် -၉၄၈) ၊ တင်ဆောင်နိုင်သောခရီးသည် (၃၁၅)
တောင်ကြီး (တန်ချိန် -၉၄၈) ၊ တင်ဆောင်နိုင်သောခရီးသည် (၃၁၅)
သံလွင် (တန်ချိန် -၅၉၂) ၊ တင်ဆောင်နိုင်သောခရီးသည် (၄၄၀)
ချင်းတွင်း (တန်ချိန် -၅၉၂) ၊ တင်ဆောင်နိုင်သောခရီးသည် (၄၂၈)
နိုင်ငံတကာနှင့်မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းများသို့ ကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး အတွက် မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောလုပ်ငန်းမှ အောက်ပါခရီးစဉ်များ ပြေးဆွဲပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်-
-တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်
- စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း
- အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကုန်သေတ္တာခရီးစဉ် - ရန်ကုန်နှင့်စင်္ကာပူကြား (သုံးရက်ခြားခရီးစဉ်)
- စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ၊ မြိတ်၊ ကော့သောင်း၊ ကိုကိုးကျွန်း
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့်ကမ္ဘာ့သင်္ဘောလုပ်ငန်းနှင့်ရင်ဘောင်တန်းလိုက်နိုင်ရန် အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ပင်လယ် ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အတွေ့အကြုံများဖြင့် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို အထောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ပြည်တွင်း လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စေရန်မြန်မာ့ကြယ် ငါးပွင့် သင်္ဘောလုပ်ငန်းသည် ဓာတ်မြေဩဇာ၊ ဘိလပ်မြေ၊ ပဲမျိုးစုံ၊ သစ်နှင့် အခြားပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်များကို သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။
ခေတ်မီဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာသော ပင်လယ်ရေးကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ကွန်တိန်နာ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို ရန်ကုန်နှင့် စင်္ကာပူကြားတစ်ပတ်လျှင် (၂)ကြိမ် သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးလျက် ရှိသည်။
မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်းဖြင့် တင်ဆောင်လာသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတွင်ကုန်တင်/ကုန်ချမှုလုပ်ငန်းမှန်ကန် မြန်ဆန်စေရန် ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာနတစ်ခု ဖွင့်လှစ်၍ ထိရောက် စွာဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
နယ်စပ်ဒေသများဖြစ်သော ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း၊ တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းရှိ ဆိပ်ကမ်းမြို့ များဖြစ်သည့် စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ၊ ကိုကိုးကျွန်း၊ မြိတ်၊ ကော့သောင်းတို့ကို ခရီးသည်နှင့် ကုန်များသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်စေရန် အတွက် ဆိပ်ခံတံတားတစ်ခုကို သာကေတမြို့ နယ်ရှိ ပဲခူးမြစ်ကမ်းပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပြီး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
http://www.mfsl-shipping.com Archived 11 January 2016 at the Wayback Machine.
132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon, Myanmar. Tel: ( 951 ) 295 279, 295 280, 295 281 Fax: ( 951 ) 297 669, 295 174 E-mail: mfslhq@mptmail.net.mm
Myanma Five Star Line C/o, Embassy of Union of Myanmar 19(A), Charles Street, London WIX 8ER, United Kingdom. Tel : 0044 171 4912919 Fax: 0044 171 6294169 e-mail : stareplondon@btopenworld.com
Myanma Five Star Line Nissin Corporation Eishin Building, 3rd Floor,5, Sanban-cho, Chiyoda-ku Tokyo 102, Japan Tel : 0081 332386379 Fax: 0081 332386378 e-mail : stareptokyo@excite.com
Myanma Five Star Line BSA Transportation Pte Ltd. 10 Anson Road # 12-04 International Plaza, Singapore 079903 Tel : (65) 62275268 Fax: (65) 62278203 e-mail : bsat@pacific.net.sg
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်_သင်္ဘောလုပ်ငန်း&oldid=718780" မှ ရယူရန်
၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။